सुनकोसी पहिरोमा बेपत्ता १ सय २३ जनालाई मृत घोषणा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
सुनकोसी पहिरोमा बेपत्ता १ सय २३ जनालाई मृत घोषणा
प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०७१, बुधबार August 6, 2014
साउन २१ ।सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोकको मांखा स्थित सुनकोसी पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका तर शव नभिटेका सबै १ सय २३ जनालाई सरकारले मृत घोषणा गरेको छ ।
खोजविनका क्रममा जिवितै भेटिने संभावना लगभग समाप्त भएका कारण बेपत्ता भएका सबैलाई मृत घोषणा गरी राहत वितरण सुरु गरिएको हो ।
शनिार बिहान ३ बजे गएको पहिरोमा १ सय ५६ जना हराएका थिए ।
हराइरहेका मध्ये खोजबिनका क्रममा ३३ जनाको शव भेटिएको थियो । दुई सय जति घर डुवानमा परेका छन् ।
सुनकोसी आसपास गाविसका झण्डै ५ हजारजना विस्थापित भएका छन् । प्रशासनले हराएकाहरु नभेटिने भन्दै मरिसकेको घोषणा गरेपछि बेपत्ताका परिवारजनले अहिले हिन्दु धर्मसंस्कार अनुसार अहिले कुशको शव बनाइ सामूहिक दाहसंस्कार गरी काजकिरिया गर्न थालेका छन् ।
मृतका आफन्तहरुले राहत बुझ्ने काम पनि भइरहेको छ । प्रशासनले अहिलेसम्म घटनापछि विस्थापित भएकाहरुलाई ६२ बोरा चामल, १७ बोरा दाल, ९ बोरा नुन, पाउरोटी र दुनोटलगायत खाद्यन्न सामाग्री वितरण गरिएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।
सुनकोसीमा पहिरोले थुनिएको बाँध फुटालेर पानीको वहाव घटाउन नेपाली सेनाले केहि जलश्रोत विज्ञहरुको सहयोगमा आज पनि ठूलठुला विष्फोट गराउने तयारी गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी प्रमुख भरतबहादुर बोहोराले जानकारी दिनुभयो ।
हिजो सेनाले हेलिकोप्टरको सहायतामा दुईओटा विस्फोट गराएपनि पछि बर्षा भएका कारण काम गर्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नदीमा अहिले प्रतिसेकेण्ड १ सय ८० क्यूसेकको दरले पानी भोटेकोसी र सुनकोसीबाट आइरहेकामा २ सय ५ क्यूसेक पानी प्रतिसेकेण्ड ओभरफ्लो भएर गइरहेको छ । आज सेनाले हेलिकोप्टरद्धारा बिष्फोट गराएपछि थप २ सय ५० क्यूसेक पानी निकास खुलेर जानेछ ।
तलाउमा पानीको सतह घटेर साबिककै अवस्थामा फर्कन ५ देखि ६ दिनसम्म लाग्नसक्ने जलश्रोत बिज्ञहरुले अनुमान लगाएका छन् । नेपाली सेनाले भारतका जलश्रोत बिज्ञहरुको सहयोगमा नदिको बाँध फोडेर तालको पानी सुरक्षित रुपमा कटाउने पहल गरेको छ ।
आज पनि उद्धारकर्मीहरुले दुइ ओटा स्काभेटर साथै डोजरको सहयतामा हराएकाहरुको खोजी कार्य जारी राखिएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।
पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा (सूचना सहित)
नेपालगन्ज । पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। नगर […]
न्युड आर्टमा किन रमाउँछन् कवि–कलाकार ?
काठमाडौं, झट्ट नाम सुन्दा नेपाली पप गीत सुन्नेहरूलाई लाग्छ– उनको नयाँ गीत बजारमा आएको हुन सक्छ । तर होइन । […]
निरन्तर बढ्दै सुनचाँदीको मूल्य
काठमाडौं । केहि दिनयता सुनको भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । आज सुनको भाउ तोलामा २ सय रुपैंयाले बढेर […]
मध्यपुर थिमी नगरपालिका–११, दिगुटोलमा माटोबाट बनेको विद्युतीय हिटर आगोमा पोल्दै । हिटरको माग ह्वात्तै बढेपछि […]
मौसममा बदली : वर्षाको सम्भावना कहाँ–कहाँ ? कस्तो रहन्छ आगामी तीनदिन
काठमाडौं । आज देशका अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ । मौमस पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशको […]
कांग्रेस र एमालेवीच जुहारी चलिरहँदा राष्ट्रपति कार्यालय पनि विवादमा
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशमा दलीय सहमति नभएसम्म राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण नगर्ने […]